Wax kasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Runner Blade Kahor Intaadan Arag Sequel - Dhaqanka Pop
Wax kasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Runner Blade Kahor Intaadan Arag Sequel
Marka hore Blade Runner 2049 teaser movie ku dhacay, waan la yaabay Sababtoo ah waxaan ahay #deggan guriga Complex, waxaan ku soo koray Ridley Scott asalkiisii Blade Runner noqoshada shaneemo sharaf leh. Jahannamo, xitaa Madaxweyne Obama wuxuu la yaabay cilmiga sayniska. Midda ayaa ah, iyadoo macluumaad dheeri ah iyo isjiidjiyeyaal ay ka soo baxeen filimka, uma muuqan in dadka aan isku waddanka nahay ay daneeyeen. Filimkan, oo helay Harrison Ford wuxuu ku soo noqonayaa kaalintiisii ​​caanka ahayd ee Deckard, ugaadhsade wax-soo-saar leh, wax aysan dadku ka bixin? Xitaa iyada oo Ryan Gosling, Robin Wright, Jared Leto, iyo Dave Bautista lagu soo tuuray dunidan, kaliya uma muuqan in filimkan uu isku xirayo sidii aan u malaynayay, iyo markii aan ag maray shaqaale shaqsiyaad isku fikrad ah, waxay dareentay inaan keligay ahayn: kaliya ma aysan dareemin inay dadku ka qoslinayaan taxanaha filimka 35-sano jirka ah ee cilmiga sayniska.
Taasi waa ilaa lambarrada sanduuqa sanduuqa hore ay bilaabaan inay soo galaan. Waxay u egtahay Blade Runner 2049 waxaa la filayaa in la sameeyo meel u dhaxaysa $ 43 milyan iyo $ 47 milyan dhammaadka usbuuca furitaanka, oo leh iibinta tigidhada hore bannaanka kuwa sida aadka ah loo amaano Mad Max: Wadada Cadhada , kaas oo saarnaa doontii la midka ahayd sida Blade Runner 2049 . Filimkan ayaa la sheegay in lagu sameeyay lacag dhan 185 milyan oo doolar, taas oo sameyn doonta mid ka mid ah filimada R-ka ugu qaalisan abid , laakiin dhibcihiisii ​​Yaanyada Dillaacday ee 96% (waqtiga qoraalkan) iyo rabitaanka ah in la arko haddii ay dib u soo ceshato sixirkii asalka ahaa ayaa ka caawin kara filimkan inuu u qalmo sugitaanka ... iyo sumadda qiimaha.
Waxa aan ka fahmay, aqoonta filimka asalka ah waa waajib; ahaanshaha inaan ahay #xaqiiqda shaqaalaha Complex, waxaan u arkay inay macno ii leedahay inaan ku burburiyo meeshii asalka ahayd Blade Runner waxay ka timid, saamaynteeda, waxaanan rajaynayaa inay ka dhigaan kuwa xiisaha gudbay xitaa xoogaa aad ugu faraxsan inay garaacaan tiyaatarada si ay u eegaan waxa noqon kara mid ka mid ah filimada ugu wanaagsan 2017.
Waxay ku saleysan tahay sheekada Philip K Dick Androids ma ku Riyoodaan Idaha Korontada?
Qoraaga khayaaliga sayniska Philip K. Dick's 1968 -kii Ma ku riyoodaa Androids Idaha Korontada ? wuxuu dhacay 1992-kii dabayaaqadii kadib oo helay nin ugaadhsade ah oo magaciisa la yidhaahdo Rick Deckard oo eryanaya lix ka baxsaday Nexus-6 androids isagoo rajaynaya 'inuu hawlgab noqdo' (aka dil). Riwaayaddu waxay galaysaa mawduucyada naxariista iyo waxa ay dhab ahaantii ka dhigan tahay dadnimo, waxaana loo rogay wax walba laga bilaabo taxanaha buugga majaajilada iyo riwaayadda ilaa filimka Blade Runner.
Ereyga 'orodyahanka daabku' kama iman sheekada, in kastoo. Ereygaasi wuxuu ka yimid daaweyn loogu talagalay sheeko -qoraaleed 1974 -kii Bladerunner taasi marna lama adeegsan. Dadku waxay doonayeen inay buugga Dick u beddelaan filim sannado, ka dib markay jeclaadeen ereyga 'bladerunner', Ridley Scott wuxuu ku dhammaaday inuu u qaato sidii uu ula qabsan lahaa shaneemo ee buugga Dick.
qoyan koob cupcake vanilla ka xoq
Nasiib darrose, Dick waligiis ma arkin Blade Runner , maadaama uu geeriyooday bilo ka hor intii aan la siidayn Juun. Dick ayaa la sheegay inuu ka xumaaday mashruuca, maadaama uusan markii hore ka warqabin jiritaanka filimka. Waxaa la sheegay inuu neceb yahay mid ka mid ah qoraalladii ugu horreeyay, laakiin geeridiisa ka hor, wuxuu awooday inuusan akhrin oo keliya farta dib loo eegay (oo la sheegay inuu ku qancay), laakiin xitaa waxaa la daawaday muuqaallo ku saabsan saamaynta gaarka ah ee filimka loo adeegsaday. , isagoo Ridley Scott u sheegaya inuu adduunka ka dhigay sidii uu markii horeba u maleeyay.
Ugaarsiga kuwa wax ku daya
Gudaha Blade Runner , baadi goobka dhalan rogayaasha (a.k.a androids) ayaa ka dhigaysa udub dhexaadka sheekada. Deckard, oo hadda ah sarkaal hore oo boolis ah, ayaa ah ugaadhsiga ugu fiican ee dhulka, isaga oo adeegsanaya imtixaanka 'Voight-Kampff' (kaas oo ka kooban su'aalo taxane ah oo loo isticmaalo in lagu go'aamiyo in qofka la wareystay uu dhab ahaantii yahay android ama aadane), wuxuu awoodaa inuu qeexo waxa jira. Waxaan hore u aragnaa u janjeerayaasha wax burburiya ee kuwaan wax soo celiya, iyo sidoo kale sida ay u noqdaan kuwo ku duubnaa xusuusta lagu beeray madaxooda oo ay dareemaan inay naftoodu dhab tahay.
Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay caado dhaqameed saamayn weyn leh
In kasta oo aysan ahayn guulo ganacsi (samaynta $ 33.8 milyan xafiiska sanduuqa oo ku baxay miisaaniyad dhan $ 28 milyan), Blade Runner Waxaa lagu ixtiraamaa inay tahay ifafaale dhaqameed run ah. Waxaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah tiirarka udub -dhexaadka u ah dhaqdhaqaaqa cyberpunk, kaas oo iftiiminaya isku -darka horumarka farsamada ee ka dhanka ah burburka nidaamka bulshada; wax walba oo ka Matrix saddex -geesoodka iyo Ghost In Shell -ka ciyaaraha sida Mugdi Fiican waxaa loo arki karaa farac toos ah oo Blade Runner . Jahannamo, filimada sida A.I. iyo Aniga, Robot aad dareentid sida tooska ah ee 'sayniska ayaa na dili doona' sheekada sheekada.
Hal dhibic oo kale oo xiiso leh ayaa ah in filimka (iyo xaaladdiisa cibaadada ka dib) ay gacan ka gaysatay laba shuruudood: wax -soo -saar iyo dib -u -habeyn, kan dambe oo tilmaamaya (sida Wadahadalka ku rid 2016) 'naqshadeynta xariifka ah ee filimada, oo leh qaab-dhismeedkeeda dambe iyo kaftan muuqaal ah.' Waxay sidoo kale gacan ka geysatay sidii Harrison Ford iyo Rutger Hauer loo gelin lahaa waddada xiddigga.
Waxaa jira noocyo badan oo filimka ah
Waa kan meesha Blade Runner Taariikhda iyo dhaxalka ayaa xiiso leh. Wadar ahaan siddeed nooc oo kala duwan Blade Runner jira, dhagaystayaasha imtixaanka hore ilaa goynta ugu dambaysa. Waayo? Waxay si dhab ah u dareensan tahay inay jiraan kala duwanaansho dhowr ah oo u dhexeeya waxa Ridley Scott uu rabay in filimku noqdo iyo waxa Warner Bros. u maleeyay inay u shaqayn doonto dhagaystayaasha (oo ay ku jiraan 'dhammaadka farxadda leh' ee Warner Bros. doonayay in lagu daro). Wax kasta oo ka yimid sheekada Deckard (oo la sheegay in lagu soo daray boostada sababtuna tahay dhagaystayaasha imtixaanka oo aan fahmin filimka) ilaa dhibcaha ugu dambeeya ayaa laga saaray oo la beddelay, waxay sababi karaan jahawareer iyo dood ku saabsan nooca ay tahay nooca ugu wanaagsan ee la daawado si loo waayo -aragnimo u yeesho filimkii loogu talagalay.
Sannad -guuradii tobnaad ee filimka ee 1992, 'gooynta agaasimaha' ayaa la sii daayay, ka dib markii Scott uu ka xanaaqay nooc ka mid ah nuqulka shaqada ee filimka oo loo sii daayay dad weynaha. Scott, oo ka shaqaynayey Thelma & amp; Louise waqtigaas, kuma qancin noocaan, oo Ford laftiisu wuxuu sheegay Boqortooyadii in filimku uusan isaga dhaqaajin haba yaraatee, isaga oo ugu yeeray 'jimicsi naqshadeyn.' Blade Runner waa la siidaayay, kaas oo ahaa nooca kaliya ee Scott uu gacanta ku hayay farshaxanka oo dhammaystiran.
Nooca aad daawato ku xiran tahay ku saabsan waxa adiga kaaga muhiimsan. Goynta masraxa ee 1982 -kii ayaa laga yaabaa inay noqoto tan ugu fudud ee la fahmi karo, iyadoo leh 13 -ka qodob ee sheekada Ford, oo lagu daray waxay u saamaxdaa in badan oo saamaynta noir ah oo filimku ka soo qaato. Goynta agaasimaha 1992 waxaa laga yaabaa inuu u dhawaado qorshihii asalka ahaa ee Scott, laakiin sidoo kale waxaa ku jira miraha su'aalaha ugu waaweyn: Deckard laftiisu ma yahay mid ku -dayasho leh? Waxa kale oo ka mid ah dhawaaqa la soo celiyay, iyo sidoo kale saddex muuqaal oo dheeraad ah oo kaliya lagu arkay goynta caalamiga ah. Waxay u dhammaystiran tahay sidii asalka ahayd ee la heli lahaa, oo waxay ku dari doontaa lakab cusub sheekada filimka dheer, ee soo jiidashada leh ee ku saabsan waxa ay noqonayso aadanaha.
keega velvet cas oo baraf leh farmaajo
Blade Runner runtii waa shaqo aad u qurux badan oo la daawado. Xitaa qaabkeedii ugu weynaa, wali waa hawl aad u ballaaran, oo daawadayaasha ku adag si ay ugu adkaystaan ​​sheekayn, sheeko baare hoose oo lagu dhigay dystopia mustaqbal leh jilayaal laga yaabo ama aan noqon karin dad. Sheekada la'aanteed, sheekada tartiib-tartiibku waxay u baahan tahay fiiro gaar ah. Waa filim muhiim ah, gaar ahaan qof kasta oo isku tilmaamaya filim filim run ah, waxaana rajeyneynaa in taxanaha la sugayay uu helo hab lagu qabsado xitaa xoogaa nuxurka asalka ah.
maxaa tuke uga tagay gabdhaha haramcadka
sida cabitaan kasta loogu rogo cirrid